TV ga Qaranka oo awoodi waayey inuu si toos ah uu u soo daayo barnaamijka madadaalada heesaha Ciida | SDWO.COM & SomalilandNews.net
TV ga Qaranka oo awoodi waayey inuu si toos ah uu u soo daayo barnaamijka madadaalada heesaha Ciida
Published on July 28, 2014 by sdwo · No Comments
Hargeisa 28/07/2014 (SDWO.COM & SomalilandNews.net) TV ga qaranka ayaa ku fashilmay inuu soo daayo barnaamij toos(live) ah oo ahaaa madadaaalada Fanka iyo Suugaanta ee habeenka Ciida. Waxaase waxa lalayaabo ah in lagu bedelay oo inuu toos ama si live ah u baxayo laga dhigay barnaamij heeso ah oo la duubay wiigii u danbeeyay Ramadaanta oo ay ku jireen qaar ka mid ah kooxda Xidigaha Geeska, Nimco Yaasiin iyo Qaboojiye.
Dhinaca kale waxaa sii fashiliyey barnaamijkaas dadka looga dhigayey inuu Live yahay waxa ka dhex muuqatay fanaanada weyn ee Yurub geenyo oo iyadu 3 cisho ka hor tagtay Dubai oo caawana xaflad weyn ku qabanaysa magaalada Dubia oo xafladeedii Dubai oo socotay xili uu TV ga qaranku ka dhigayey in si live ah u dhexfadhido Studio yaha TV ga qaranka ee Hargeysa.
Waxay dadku isweyiinayaan ma farsamo xumo ayay ka noqotay mise dhaqaale la,aan baa suurtogeliwaayey in TV gu si toos ah hawada u soo galo oo aan dadka barnaamij duuban aan live looga dhigin. Waxa haboonayd in ay daawadayaashooda sida uu xaalku yahay ay u sheegaan oo ay yiraahdaan waxaan idiin soo deynaynaa barnaamij aanu u sii duubnay uguna talo galnay maalinta ciida.
Dhinaca kale dibu dhaca TV ga qaranka ku yimid waxa kale oo aad ku garan kartaa iyadoo xafladii fanka iyo suugaanta ee iyaduna live ka ahaan jirtay ee habeenka ciida laga soo deyn jiray Studio ha tv gu ku leeyahay London oo isaguna habayaraatee aan hawada soo gelin.